रातारात चमत्कार हुनको लागि सुत्नुअघि सिरानीमुनी यी पाँच चिज राख्नुस् | YesKhabar
२०७६ साल माघ १४ गते, मंगलवार
थाहा पाउनुस आइतबार जन्मेका मानिसहरुको स्वभाव यस्तो हुन्छ
जानी राखौं बिहीबार कुन भगवानको व्रत बसे लाभ मिल्छ ?
२०७६ साल श्रावण १९ गते, आईतवार ०४:५४ AM
हनुमान चालिसा- हरेक रात सुत्ने बेलामा हनुमान चालिसा या सुन्दरकाण्ड पाठ गरेर पुस्तकलाई सिरानीमुनी राखेर सुत्नुस् । शास्त्रका अनुसार यसो गर्दा मन एकाग्र भएर शान्त हुन्छ । मनमा डर, अहम र खराव सपना समेत आउँदैन । सपनाविहिन सुताइनले शरीर पुनर्जाग्रित हुन्छ ।
फलामको उपकरण- सुत्ने बेला सिरानी मुनी फलामको उपकरण राख्नु राम्रो मानिन्छ । यसले तपाइँको नजिक नकारात्मक उर्जा आउनबाट रोक्छ । वालवालिका सुत्ने बेला सानो कैँची वा चकु सिरानी मुनी राख्ने चलन पनि यसकै कारण चलेको हो ।
मुला- सिरानी मुनी मुला राखेर सुत्ने र विहान उठेर शिवलिङ्गमा अर्पण गर्दा शुभ फल मिल्छ । शास्त्रका अनुसार यसले राहुको प्रभावलाई कम गर्छ र खराव सपना वा मानसिक तनाव हुनबाट रोक्छ ।
फूल- सुत्ने समयमा सिरानी मुनी भगवानलाई अर्पण गरेको फूल राख्दा मनमा शान्ति प्राप्त हुने शास्त्रमा उल्लेख छ । यसो गर्दा निद्रा पनि छिटो लाग्ने र विहान उठ्दा ताजा महसुस हुने समेत शास्त्रले उल्लेख गरेको छ । पछिल्लो समयमा थेरापीमा समेत यस्तो प्रयोग हुन थालेको छ ।
दुर्गा सप्तसती पाठ- दुर्गा सप्तसती पाठलाई सिरानी मुनी राखेर सुत्दा भयबाट मुक्ति मिल्ने शास्त्रमा उल्लेख छ । यसले दिनभर हुने चिन्ता र तनावबाट मुक्ति हुने शास्त्रमा उल्लेख छ । यसो गर्दा विहानमा उठ्दा ताजापन अनुभव समेत हुने विश्वास गरिन्छ ।
यो पनि पढ्नुस – धर्म ग्रन्थमा सूर्यलाई प्रधान देवता मानिएको छ। पुराणको अनुसार, प्रत्येक महिनामा सुर्यको एउटा विशिष्ट रुपको पुजा गरिन्छ। त्यसको अनुसार, पौष मासमा भग नामक सुर्यको उपासनाको विधान छ। यो चोटी पौष मासको प्रारम्भ १८ मङ्सिर सोमवारबाट हुँदैछ। जुन पुस १८ सम्म रहने छ। आदित्य पुराणको अनुसार पौष महिनाको हरेक आइतबार केहि सजिलो उपाय गर्नाले व्यतिको हरेक इच्छा पुरा हुनसक्छ। जुन व्यक्तिको कुण्डलीमा सुर्य अशुभ छ ति व्यक्तिहरुले पनि पौष मासको सुर्यसंग सम्वन्धित उपाय गर्नपर्छ।
१. बिहान स्नान गरेपछि तामाको लोटामा शुद्ध जल लिएर सुर्यदेवलाई अर्पित गर्नुस !
२. बिहान सुर्यदयाको समयमा रातो फुल, सिन्दुर आदिले सुर्यदेवको पुजा गर्नुस र सकेसम्म रातो बस्त्र पनि लगाउनुस !
३. रातो चन्दनको मालाले ऊँ घृणी सुर्याय नम: मन्त्रको जप गर्नुस। कम से कम ५ मालाको जप गर्नुस !
४. आइतवार गरिब व्यक्तिलाई गँहु दान गर्नुस ! यसले पनि सुर्यको दोष कम हुन्छ।
५. कुनै विद्वान पण्डितलाई सोधेर रूबीलाई तामाको औठिमा राखेर आफ्नो सालकी औलामा लगाउनुस !
बुद्धिमान हुन खानुस् शाकाहारी खाना
जिब्रोले भन्छ मान्छेको स्वभाव
आँखा सुख्खा हुन नदिन यसो गरौं
हड्डी मजबुत राख्न व्यायाम र खानपानमा ध्यान दिनुपर्छ
‘छोराछोरीको माया पाउन आमाबुबालाई प्रेम गर्नुपर्छ’
स्थानीयको विराेधपछि सचिवालयले हटायो ‘यतीका मस्कट’
गायिका आस्था राउतलाई धरौटीमा छाड्ने तयारी
काभ्रेमा प्रहरीद्वारा २५ सय लिटर घरेलु मदिरा नष्ट
कोरोनाको संक्रमण फैलिएपछि १ करोड बढी जनसंख्या भएको वुहान शहर सुनसान
दाङमा साढे दुई किलो चरेससहित तीन जना प्रकाउ
झापा जिल्ला तोरीमा आत्मनिर्भर
सभामुख सापकोटालाई बधाई दिन सिंहदरबार पुगिन् चिनियाँ राजदूत
इसेवा ११ औँ वर्षमा प्रवेश
ओखलढुंगामा जीप दुर्घटना हुँदा एक जनाको मृत्यु, तीन घाइते